State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi receives Cambodian Deputy Prime Minister – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar received Mr. Prak Sokhonn, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of the Kingdom of Cambodia who has been in Myanmar to attend the 2nd Meeting of Joint Commission for Bilateral Cooperation between Myanmar and Cambodia at the Presidential Palace on 1 February 2019.
During the meeting, the State Counsellor and Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of the Kingdom of Cambodia discussed various issues on promoting bilateral relations, economic and socio-cultural cooperation, exchange of high level visit between the two countries and enhancing people-to-people contacts.
They also discussed to enhance cooperation among developing countries at the international fora in addressing the challenges facing them and in the areas of mutual interests. Also present at the meeting were U Min Thu, Union Minister for the Office of the Union Government, U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation, Senior Officials from the Ministry of Foreign Affairs, Ambassador of Cambodia to Myanmar and Senior Officials from Cambodia.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် မြန်မာ-ကမ္ဘောဒီးယား နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင် အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး မစ္စတာ ပရတ်ဆုတ်ခွန်းအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်၊ ၁၅၀ဝ နာရီအချိန်တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်တွင် လက်ခံ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ယင်းသို့ တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-ကမ္ဘောဒီးယား နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများ၏ အပြန်အလှန် ဘုံအကျိုးစီးပွားအတွက် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ ချစ်ကြည်ရေးခရီးများ အပြန်အလှန် သွားရောက်ရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုယဉ်ကျေးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ပြည်သူအချင်းချင်းအကြား ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု မြှင့်တင်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံငယ်များ အနေဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသော စိန်ခေါ်မှုများ၊ အကျိုးတူ ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာတွင် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ အတူတကွ ရပ်တည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အား ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသို့ နှစ်ဖက် အဆင်ပြေ သင့်လျော်သည့် အချိန်တွင် လာရောက် လည်ပတ်ရန် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ဟွန်ဆင်မှ ဖိတ်ကြားမှုကိုလည်း ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ပရတ်ဆုတ်ခွန်းမှ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းသူ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကမ္ဘောဒီးယား သံအမတ်ကြီးနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။